WZX အမျိုးသမီးပုံနှိပ် Leggings Jogger Pants Pants စက်ရုံထုတ်လုပ်သူ OEM ODM | Wanzhanxing Apparel
WZX sheamless underwear factory / shapewear ထုတ်လုပ်သူသည် OEM / ODM / လက်ကားအနိမ့် moq oder ။ Accpet စိတ်ကြိုက်ပုဂ္ဂလိကတံဆိပ် / လိုဂို။
shapewear0တ်စားဆင်ယင်ခန်း
သားဖွား0တ်ဆင်ခြင်း
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > အလွှာ > စိတ်ကြိုက်လုပ်ထားတဲ့ leggings
WZX အမျိုးသမီးများ Leopard ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူ Producard Pants Pants စက်ရုံထောက်ပံ့ရေး OEM OEM OEM
အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီး Shapewewewewewewewewewewewewewewewewear အပြည့်အဝအရှည် leggings ပေးသွင်း
WZX အမျိုးသမီးများသည်အိတ်ဆောင်စက်ရုံထုတ်လုပ်သူ OEM ODM နှင့်အတူအလွယ်တကူခြေထောက်များချောချောမွေ့မွေ့
WZX Highted Wabded Leggings များအတွက် WASHTED Highted Leggings သည် Food Factory Factory Wentrier OEM OEM ODM
WZX အမျိုးသမီးပုံနှိပ် Leggings Jogger Pants Pants စက်ရုံထုတ်လုပ်သူ OEM ODM
အမျိုးသမီးများအတွက်မြင့်မားသော0ံပုလွေများ - Tummy Control ဆန့်ကျင်သောပျော့ပျောင်းသောလေ့ကျင့်ခန်းအားကစားလေ့ကျင့်ခြင်း
ဒီ 4- လမ်းဆန့်& အစိုဓာတ် -resent legging သည်ကွေးခြင်းနှင့်ဆန့်နေစဉ်အတွင်း Muffin ထိပ်နှင့်အများဆုံးလွှမ်းခြုံမှုအတွက်ကျယ်ပြန့်သောခါးပတ်ရှိသည်။ မြင့်မားသောမြင့်တက်လာခြင်းကအမျိုးသမီးများကိုအပိုများကသူတို့၏အကောင်းဆုံးကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ခံစားရရန်ယုံကြည်စိတ်ချမှုတိုးပွားစေသည်။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်မှအစိုဓာတ်ကိုဖယ်ရှားရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအပြည့်အဝလွှမ်းခြုံမှုပေးထားသည်။ သဘာ0လှုပ်ရှားမှုအကွာအဝေးအတွက် Chafe-free နှင့် Ergonomic SEAMs ။ ကိုယ်ပိုင်ထောင့်အောက်ခြေကသင့်ရဲ့ခြေထောက်တွေကိုပိုပြီးပိန်လှတယ်။
အရောင်ကိုလက်ခံ / လက်ခံပါ
S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXL / လက်ခံစိတ်ကြိုက်
ထောက်ခံစာ / OEM / ODM ကိုထောက်ပံ့ပါ
WZX - Professional Sheeamess စက်ရုံထုတ်လုပ်သူ
Shantou wanzhanxing အဝတ် co ။ Ltd ။ 13.500 စတုရန်းမီတာကိုဖုံးအုပ်ထား, တစ်ဦး BSCI အသိအမှတ်ပြုစက်ရုံ, တရုတ်လက္ကားထုတ်လုပ်သူထိပ်တန်း Shapewear ကုမ္ပဏီများဖြစ်ပါသည်။ သင်၏အမှတ်တံဆိပ်အတွက်0န်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက်အဆင့်မြင့်နည်းပညာကိုအသုံးပြုနေစဉ်စက်ရုံနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာအယူအဆကိုစက်ရုံမှဆိုသည်။ ကျနော်တို့ oem ထောက်ပံ့ပေးပါပြီ&ကမ္ဘာတစ်လွှားမှ ODM0န်ဆောင်မှုများအမေရိကန်, ယူကရိန်း, CA, AU, DE စသည်တို့မှ0န်ဆောင်မှုများ,
2. ကျွန်ုပ်တို့သည်နမူနာများကိုလျင်မြန်စွာပြုလုပ်နိုင်ပြီး7ရက်အတွင်း၎င်းတို့ကိုဖြန့်ဝေနိုင်သည်။
3D Stereoscopic ဖြတ်တောက်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့တွင် logo hot stamping ဌာနတစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည်စိတ်ကြိုက်အပူလွှဲပြောင်းလိုသောတံဆိပ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
ဒီဇိုင်း ဦး စီးဌာန
- ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်နေရာတည်းအွန်လိုင်း / အော့ဖ်လိုင်းအမှတ်တံဆိပ်စိတ်ကြိုက်0န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
WZX သည်အတွေ့အကြုံရှိ shapewear လက်ကားထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး0တ်စုံကောင်းသည့် Shapewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewear, သားဖွားစ်စသည်တို့ကိုတရုတ်နိုင်ငံ Guandong တွင်တည်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်လစဉ်စွမ်းရည်ပေါင်း 750,000 / တစ်လရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အီးယူ, ယူအက်စ်, ယူကေ, သြစတြေးလျနှင့်အာဖရိကတို့တွင်ဖောက်သည်များရှိသည်။ Shapewewear လက်ကားများ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏လက်ကားရောင်းဝယ်ရေးကွန်ယက်ကိုချဲ့ထွင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တောင်းဆိုလျှင်ပုဂ္ဂလိကတံဆိပ် / အဖြူရောင်တံဆိပ်ခတ်အတွင်းထုတ်လုပ်မှုများကိုလည်းပြုလုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထုပ်ပိုးခြင်း, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဒီဇိုင်း0န်ဆောင်မှုများကိုလည်းပေးပါသည်။
အတားအဆီး package ကိုစိတ်ကြိုက်
BSCI စက်ရုံသည် NIIT အမှတ်တံဆိပ်နှင့် ပူးပေါင်း. Oeko-Tex100 အသိအမှတ်ပြု Yarn ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်ချောမွေ့စွာ shapewear ကိုရွေးချယ်ခဲ့သနည်း။
ချောမွေ့သောအ0ယ်များသည်အ0တ်အထည်များ (ဘေးထွက် seams မပါဘဲ) ကို အသုံးပြု. အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်နှင့်အညီ, ရိုးရှင်းသောဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်အပ်ချုပ်ပြီးနောက်အဆင်သင့် -to- ဝတ်ဆင်။
1. ဘေးဘက်စုံချုပ်ရိုးအဘယ်သူမျှမအောင့်မရန့်ဟောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်အ0တ်အထည်များကိုချုပ်ထားသောအဝတ်အစားများထက် ကျော်လွန်. အ0တ်အစားများကိုပြုလုပ်စေသည်။
3. ယက်လုပ်ခြင်းအတွက်အမျှင်အမျိုးမျိုးကိုသုံးနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်၎င်းသည်အမျှင်၏နှစ်သိမ့်မှုနှင့်အလှအပများကိုထင်ဟပ်စေသောအခြားအမျှင်များနှင့်အတူ elastic fiber ၏အားသာချက်များကိုအပြည့်အ0ပေါင်းစပ်ပြီးကြာရှည်ခံသော, -Deformed နှင့်ဂရုစိုက်ရန်လွယ်ကူသည်။
အပြည့်အဝအသိဉာဏ်ရှိသောကြိုး controller, ချောမွေ့သောအဝတ်အစားများအတွက်အလုပ်လုပ်။
NIIT အမှတ်တံဆိပ်, Oeko-Tex100 အသိအမှတ်ပြု YARN ပေးသွင်းသူ။
Computer Programming မှတဆင့်ချောမွေ့သောအဝတ်အစားပုံစံဒီဇိုင်း။
Professional Sheeamless ထုတ်လုပ်သူ,
အမျိုးသမီးများ၏ခါးပတ်ပုံစံပုံနှိပ်ထားသောဖက်ရှင် leggings full-length ooga ဘောင်းဘီ
Wangzhanxing အဝတ်အထည်စက်ရုံ (လက်ကား)
Tummy Control, Butt Terfter, ခန္ဓာကိုယ်သာယာသူ
S, M, L, XL, 2xl (စိတ်ကြိုက်လက်ခံသည်)
Israel သရေလအမျိုးမှ Nilit
ပေါ့ပါးခြင်းနှင့် opaque4နှင့်အတူထုတ်လုပ်ခဲ့သည် Bending နေစဉ်အတွင်းသင့်အားလွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားရန်ခွင့်ပြုသည့်လမ်းဆန့်, Squatting, ရုတ်သိမ်းခြင်း, ဇာထိုးထည်၏မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆသည်ကြာရှည်ခံမှုနှင့်မမြင်ရသည့် -ron-through ကိုသေချာစေသည်။ U-crotch သည်ကုလားအုတ်ခြေချောင်းများကိုကာကွယ်ပေးပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေ့လျားနေစဉ်သင့်အားလုံခြုံစိတ်ချရသောအသိစိတ်ကိုပေးသည်။ Flatlock ဆောက်လုပ်ရေးသည် chafe minimize လုပ်သည်။
သူတို့ရဲ့အခြေခံနှင့်ပုံနှိပ်အရောင်နှင့်အတူ, ပေါ့ပါးသောအထည်နှင့် elasticized ခါး, နှင့်အလုပ်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသော fit, ကစား, ကစားကာအိမ်မှာအနားယူခြင်း။ မတော်တဆဖြစ်သော အိမ်0ယ်ခြင်း, အိပ်ပျော်ခြင်း, အိပ်ပျော်ခြင်း, ထွက်သွား, ယောဂ, Yoga, အားလပ်ရက်, ကမ်းခြေ, ဟယ်လိုဝင်းသို့မဟုတ်ခရစ်စမတ်။
4-way strech soft soft fagric သည် pose နှင့်လှုပ်ရှားမှုများတိုင်းတွင်အများဆုံးနှစ်သိမ့်မှုနှင့်ကာကွယ်မှုပေးသည်။ အစိုဓာတ်ကိုခြောက်သွေ့စွာနေရန်နှင့်အဆင်ပြေနေရန်။ ခါး& ကျယ်ပြန့်သောခါးပတ်နှင့်အမြင့်ဆုံးလွှမ်းခြုံမှုမရှိသည့်အမြင့်ဆုံးနှင့်အများဆုံးလွှမ်းခြုံမှုမရှိပါကကွေးခြင်းနှင့်ဆန့်နေစဉ်အတွင်း elastic band သည်ပြိုလဲရန်မတက်နိုင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ခြေထောက်များသည်ကောင်းသောထိတွေ့ခြင်း, အလင်းရောင်ဖြင့်နူးညံ့သောထည်ကိုအသုံးပြုသည်။ သင်၏ကိန်းဂဏန်းများသည်သက်တောင့်သက်သာ ရှိ. ရှူရှိုက်ခြင်း, ဆန့် ယားယံခြင်း, ယားယံခြင်း, ယားယံခြင်း, အပူနှင့်အနံ့ကိုပျောက်ကွယ်ရန်ကူညီသည် ချွေးသည်လျင်မြန်စွာသင်၏အသားအရေကိုခြောက်သွေ့စေသည်။
လက်ကား& အိုခေျာင်း& adm
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ချောမွေ့စွာတင်းကျပ်စွာခြေလှမ်းနေသည့်စက်ရုံ, WZX သည် Womens fitness0ံပုလွေလေ့ကျင့်ခန်းမြင့်မားသောလေ့ကျင့်ခန်းများ, ချောမွေ့စွာခါးပတ်များ,
အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်0တ်ဆင်သည်
ခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဌာန်သည်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအဆီတွန်းခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဌာန်ဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများအားမကောင်းသောအကျင့်များကိုဖယ်ရှားပြီးခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဌာန်ကိုတိုးတက်စေရန်ကူညီပေးပါ။ အစာစားချင်စိတ်, ပုံးခါး, အဆီပြားများ, အထူခတ်ခြင်း, အထူတင်ပါးများ, ဟုတ်ပါတယ်, အမျိုးသမီးတွေဟာခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ see ာန်ကို0တ်ဆင်ပြီးရွေ့လျားနေတဲ့ကွေးတွေကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်တယ်။
ဤသို့သောခန္ဓာကိုယ်ပုံစံမျိုးကိုယေဘုယျအားဖြင့်ကိုယ်0န်ဆောင်မှုနှင့်ပို့ဆောင်ခြင်းများကြောင့်ပုံရိပ်ကြီးများနှင့်အတူအသွင်အပြင်ကြီးများနှင့်အတူအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သောရင်သားကင်ဗီးယား, ဝမ်းဗိုက်, စသည်တို့ကိုစသည်တို့
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းများပေါ်မူတည်။ ပေးပို့ချိန်။ များသောအားဖြင့် UPS Express မှတစ်ဆင့် 3-7 ရက်ကြာသည်။ Air Express မှတစ်ဆင့် 7-15 ရက်။ ပင်လယ်မှရက်ပေါင်း 60 ရက်
3: မင်းရဲ့ ဦး ဆောင်မှုအချိန်ကဘာလဲ။
ဦး ဆောင်အချိန်ကအရေအတွက်ပေါ်မူတည်သည်။ စတော့ရှယ်ယာရှိပစ္စည်းများကို 24-48 နာရီအတွင်းတင်ပို့ရန်စီစဉ်ထားပါမည်။ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုများကို 15-30 ရက်အတွင်းတင်ပို့ရောင်းချမှုကိုစီစဉ်ထားသည်။
OEM / ODM ကိုလက်ခံပါသလား။
သင်၏လိုအပ်ချက်များအတွက် OEM / ODM ထုတ်ကုန်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ အနိမ့်ဆုံးအရေအတွက်နှင့်စျေးနှုန်းသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။
5. သင် logo စိတ်ကြိုက်လက်ခံခြင်းကိုလက်ခံပါသလား။
MOQ: 1PC အတွက် Logo စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုလက်ခံနိုင်သည်
ရှေ့နေ Leggings ပုံနှိပ်ပါ ပုံနှိပ်ပါ Jogger ဘောင်းဘီ
အမျိုးသမီးများအတွက်0မ်းသာသောခြေထောက်များ - ပျော့ပျောင်းသောအပျော့စ်ဤမြင့်မားသောခါး ultra ပျော့ပျောင်းသောပေါ့ပါးသော Leggings သည်ယောဂသို့မဟုတ်အားကစားရုံအတွက်အကောင်းဆုံးသောဒုတိယအသားအရေနှင့်တူရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထည်သည်သင်လုံးဝ0တ်ဆင်ထားသကဲ့သို့မက်မွန်တောင်စောင်းနှင့်ပေါ့ပါးသောခံစားချက်ရှိသည်။ ဤအမျိုးသမီးများ၏ခြေထောက်များသည်တတ်နိုင်သော, လေးလမ်းဆန့်ခြင်း, ပေါ့ပါး။ အစိုဓာတ်ကိုစိုစွတ်စေသော,
အမျိုးသမီးများအတွက်အလွန်မြင့်မားသောယောဂဘောင်းဘီ ultra-soft alkle-length tummy control forgagingsYoga Pants သည်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးထည် (နိုင်လွန်နှင့် Spandex) နှင့်ပိုမိုထူထပ်သော elastic ထည်ကိုပိုမိုထူထပ်သောနှင့် elastic ထည်သည်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘဲလေးလမ်းမပေါ်တွင်ဖြစ်သည်။ သင်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိဘဲကီထိုင်နှင့်ကွေးနိုင်ပါတယ်။ ယောဂအမျိုးသမီးများ၏အားကစားဘောင်းဘီရှည်များကိုခါးခါးသီးသီးနှင့်ဝမ်းဗိုက်ထိန်းချုပ်မှုဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ကျယ်ပြန့်သောခါးပတ်သည်သင်၏ကွေးကိုဖော်ပြထားသည်။ မကျပါ, ရိုးရှင်းသောနှင့်စတိုင်ကျသည့်လိုင်းများနှင့်ချုံ့ပုံပေါက်များနှင့် streamline ပုံစံများ။ အမျိုးသမီးများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မားသောခါးပတ်အလွှာများသည် အစိုဓာတ်ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ဒီဇိုင်းအမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးအထည်ကနေဖန်ဆင်းတော်မူ၏ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်ချွေးစုပ်ယူမှုနှင့်အတူပေါ့ပါးသောနှစ်သိမ့်မှုပေးသည် ခြောက်သွေ့သောစွမ်းရည်။
မြင့်မားသောခါး yoga ဘောင်းဘီ Capri လေ့ကျင့်ခန်း pocgings နှင့်အတူ leggings - Non- မမြင်ရ - မှတဆင့်Non- မြင်ကွင်း - မှတဆင့်& 4- လမ်းပေါ်ဆန့်သောယောဂသည်အမျိုးသမီးများအတွက်လုံးဝလေ့ကျင့်ခန်းဘောင်းဘီများရရှိရန်အလွန်သိပ်သည်းဆထည်များမှပြုလုပ်သည်။ ဤအတောအတွင်း 4-way stretch tech သည်သင်၏လှုပ်ရှားမှုတိုင်းသည်လွတ်လပ်စွာနှင့်ချဉ်းကပ်မှုအမြင့်ဆုံးများကဲ့သို့ခံစားရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Multi-Bockets တွင်လက်ဖြင့်အခမဲ့ခရီးသွားခြင်းသည် Womens leggings ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယောဂဘောင်းဘီသည်အိတ်ကပ်ပါ0င်သောအမျိုးသမီးများအတွက်လွယ်ကူသောသိုလှောင်မှုအတွက်2ဘေးအိတ်ကပ်ပါရှိသည်။
အမျိုးသမီးများအတွက် Pross Squated Yoga Pants အတွက်လေ့ကျင့်ခန်း Leggings4Way High Stick ParerySuper-Super-Super-Super-Selfky ထည်ကနေ Micro Fiber လို့ခေါ်တယ်& နိုင်လွန်နှင့် spandex ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခြေထောက်များကိုသင်၏နှစ်သိမ့်မှုအတွက်ကျယ်ပြန့်သောထည်, သင် Petite (သို့) အရပ်ရှည်ရှည်, ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံနှိပ်ထားသောခြေထောက်များသည်သင့်အားအဆင်ပြေစေရန်ကျယ်ပြန့်သောခါးပတ်ရှိသည်။ The Leggings သည်မမြင်နိုင်, ချွေးစေးလေ့ကျင့်ခန်းများအတွင်းသင်၏အသားအရေကိုအအေးခံရန်အဆင်ပြေသည်။
WZX sheamless Hollow-Out Fink Factory Finker
အမျိုးသမီးများအတွက် Leggings High Waist Yoga ဘောင်းဘီများချောမွေ့စွာလေ့ကျင့်ခန်း tummy ထိန်းချုပ်မှုတင်းကျပ်စွာ WZX Yoga Leggings သည်အစိုဓာတ်ကိုစိုစွတ်စေသော4လမ်းဆန့်ထည်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး4င်းသည်အသက်ရှူနိူင်ခြင်းနှင့် buttery နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုတို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ Gusseted Crotch သည်တိုးတက်လာသောရွေ့လျားမှုကိုတိုးချဲ့ရန်ကမ်းလှမ်းသည်, သင်အခမဲ့လှုပ်ရှားမှု, squat အထောက်အထားများ, ဤအမျိုးသမီးများလေ့ကျင့်ခန်းဘောင်းဘီသည်ဖက်ရှင်, function နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ပေါင်းစပ်မှုပေါင်းစပ်ထားပြီး, ယောဂအတွက်အပြေး, ပြေးခြင်း, စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဤယောဂအလွှာများကိုလည်းပေါ့ပေါ့တန်တန်0တ်ဆင်ရန်အသုံးပြုသည်။
WZX shiny ထည် stipe ချောချောမွေ့မွေ့ Smeamless stepless legging စက်ရုံထုတ်လုပ်ရန် OEM ODM
အမျိုးသမီး0င်များ elastic waistband Yoga Mirgraup Pants Godess Tik Tok Tok The Butt leggingsကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မားသောယောဂဘောင်းဘီများသည်ကျယ်ပြန့်စွာသက်သောင့်သက်သာရှိပြီးသက်တောင့်သက်သာမြင့်မားသောမြင့်မားသောဗိုက်ဂါးကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်သင်၏အသားအရေကိုတူး။ သင့်အားအပိုပေးသည့်အပိုပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ချေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ချောမွေ့သောတောက်ပသောခြေထောက်များသည်သင့်အားအပိုဆွဲသောအပိုထိန်းချုပ်မှုကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသောအတွက်အရည်အသွေးမြင့် elastic တီးဝိုင်းရှိသည်& အလွှာအတွက်အဘို့ကြီးသောအဘို့အကြီး၏ steamlined ကြည့်ရှုပါ။ နူးညံ့သိမ်မွေ့။ တောက်ပသောပစ္စည်းများသည်သက်သောင့်သက်သာရှိပြီးပေါ့ပါးသောထိတွေ့မှု, လေးလမ်းဆန့်နေသော leggings ကြီးစွာသော elastic နှင့်အတူသင့်ကိုအဝတ်အချည်းစည်းခံစားမှုပေးပါ။
WZX အမျိုးသမီးတွေချောချောမွေ့မဏိအရောင်းအ0ယ်ပြ factory maufactived
အမျိုးသမီးများအတွက်စက်ဘီးစီးသည့် Yoga Leggings အပြေးအတွက်ပါးလွှာသောပုံနှိပ်ဘောင်းဘီသီးသန့်ပုံနှိပ်ဒီဇိုင်းအတွက်အပြည့်အဝအရှည်မြင့်မားသောတက်ကြွသောခြေဆန်းလှောင်ပြောင်။ ၎င်းသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း, ဇိမ်ခံပစ္စည်းဖြစ်ပြီးအရေပြားကိုဆန့်ကျင်။ အလွန်ကောင်းမွန်သောခံစားမှုဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကား leggings ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်စေသည့်အဆိပ်မဟုတ်သော, ရေအခြေခံသည့်ကတ်များကို အသုံးပြု. ပြုလုပ်သည်။ သူတို့ကသင့်ရဲ့အရေပြားကိုပူပြီးချွေးထွက်လေ့ကျင့်ခန်းတွေမှာအေးအေးဆေးဆေးနေဖို့အရည်အသွေးမြင့်တဲ့လမ်းပိုင်း, ရှူရှိုက်ခြင်း, ဤအမျိုးသမီးများလေ့ကျင့်ခန်းဘောင်းဘီသည်ဖက်ရှင်, function နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ပေါင်းစပ်မှုပေါင်းစပ်ထားပြီး, ယောဂအတွက်အပြေး, ပြေးခြင်း, စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဤယောဂအလွှာများကိုလည်းပေါ့ပေါ့တန်တန်0တ်ဆင်ရန်အသုံးပြုသည်။
WZX အမျိုးသမီးတွေချောချောမွေ့မွေ့ကင်း0င်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပြောင်ပြောင်တင်းတင်းစက်ရုံပေးသွင်းသူ
Women's အဝတ်အချည်းစည်းဆေးထိုးလှည်းများအပြေးပြိုင်ပွဲများကျွန်ုပ်တို့၏ Leggings အထည်များကို Lighteight သည်နိုင်လွန်နှင့် Spandex တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်& အားလုံးအလေ့အကျင့်များအတွက် Airy ။ ဒီ buttery suppric compression နှင့်အတူ compression နှင့်အတူ compress နှင့်အတူခံစားရသည်, သင်၏ပစ္စည်းများကိုစတိုင်လ်၌ strut နှင့်နှစ်သိမ့်မှု၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုကြုံတွေ့နေရစဉ်။ Pose, Mose နှင့် Contour တို့နှင့်အတူပါးလွှာသောပါးလွှာခြင်းနှင့်ကိုက်ညီသော Ultra-stretch fit, Super Streetty ပစ္စည်းနှင့်အတူအညီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Leggings သည်4လမ်းလမ်းပြမြေပုံနှင့်အလွန်နီးကပ်သည်။